Ukudla okusheshayo nokuphumelelayo kokulahlekelwa kwesisindo
Yini ewusizo kumuntu oseningizimu akufanele ngaso sonke isikhathi afanele umhlalaphansi enyakatho. Ngakho-ke, izakhamuzi zamazwe abandayo, kwakudalwa ukudla okungekho ngaphansi kokusebenza kweMedithera. Isekelwe emaqenjini amahlanu emikhiqizo. Yini ewusizo lokho okubizwa ngokuthi ukudla kweNorway, uzothola esihlokweni esithi "Ukudla okusheshayo nokuphumelelayo kokulahlekelwa kwesisindo".
Njengokudla kweMedithera, isiNorway sisebenzisa inqwaba yezinhlanzi zasolwandle. Kumele kuqashelwe ukuthi yizipho zezilwandle ezisenyakatho ezibandayo ezibhekwa njengemithombo engcono kakhulu ye-omega-3 polyunsaturated fatty acids. Umzimba wabo awudingi kakhulu - u-1-3 amagremu ngosuku kuphela, kodwa uma bengasitholi isikhathi eside, imiphumela ingadabukisa. Iqiniso lokuthi amafutha e-polyunsaturated aphethwe umsebenzi wesistimu yezocansi ne-immune, ngezwi lemithambo yegazi, avikele ukulwa nesifo somzimba kanye nomdlavuza. Inhlanzi noma izilwane zasolwandle, ngokusho kokudla okuvamile, kufanele zivele nsuku zonke etafuleni. Inhlanzi iyanconywa ukuba ithathe indawo enkulu yenyama. Izitsha zokudla kufanele zilungiswe kusuka ku-game - elk noma inyamazane: iqukethe amafutha ambalwa kanye ne-cholesterol embi.
Izithelo ezihlukahlukene ezimnandi, ukudla okuNorway, ukwethembeka, ngeke kujabulise wonke umuntu: ama-apula avunyelwe, kanye namajikijolo asenyakatho - ama-cloudberries, ama-lingonberries, ama-blueberries, ama-blueberries, ama-cranberries. Amajikijolo amaningi ahlanganiswe nama-antioxidants: i-bioflavonoids, i-beta-carotene, i-vitamin C, ngakho-ke iyadingeka kulabo abafuna ukuhlala bebancane isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
AmaScandinavians anikezwa ukuthi afaka phakathi kwemikhiqizo yabo yemifino yemifino enokuvunwa okuhle ngisho nasezimo zezulu esenyakatho: okuyinhloko yizihlumela zaseBrussels kanye ne-zucchini. Bavunyelwe ukuba badle ngaphandle kwemingcele. I-turnips evunyelwe, izaqathe, amazambane, ukhukhamba, izinhlobo ezahlukene zeklabishi, ithanga, i-beet, u-anyanisi, i-garlic kanye nemifino enamagatsha.
Kuyinto efiselekayo ukuthi i-yogurt, ushizi nobisi, okungeziwe ku okusanhlamvu nezinye izitsha, okwenziwa ngobisi lwezimvu okuqukethwe okuncishisiwe: kuqukethe izakhi eziningana izikhathi ezingu-1.5 futhi izikhathi ezingu-2-3 eziphakeme kakhulu okuqukethwe kwamavithamini A, B no-B kunokuba inkomo. Imenyu ihlanganisa i-brine cheeses, ekhonjiswe ngokunambitheka okubukhali, okunamnandi. Khumbula nje ukuthi imikhiqizo evela kubisi lwezimvu inephunga elithile.
Ukudla kwesiNorway ukudla okusheshayo nokuphumelelayo kokunciphisa umzimba, kuvumela ukusebenzisa cishe konke okusanhlamvu, ngisho nelayisi, okuyinto eScandinavia ngokuvamile ayikhuli. Kodwa kungcono ukukhetha okunye okusanhlamvu okwejwayelekile: ama-oats, i-rye, ibhali (ibhali), okuvame ukutholakala ezitsha zikazwelonke zokupheka. Kuzo, isinkwa neminye imikhiqizo yokubhaka ibhakawa, i-porridge ilungisiwe, lapho kutholakala khona amajikijolo amasha noma omisiwe. Ukudla kwesiNorway, noma eNordic, kuvame ukubizwa ngokuthi "impendulo yasenyakatho" ohlelweni lokudla oluye lwamazwe aseMedithera. Ukuze akutshele iqiniso, ukudla okuvunyelwe kubantu abahlala emazweni angaphandle akufanele abantu abahlala ezindaweni ezikude nolwandle olufudumele: imikhiqizo eyenza isisekelo sayo iyabiza kakhulu, hhayi wonke umuntu onethuba lokwenza imenyu yakhe kuphela kubo. Ngenye indlela, kwakhiwa ukudla okuncike ezitsheni ezisenyakatho, ikakhulukazi amaScandinavia. Njengoba kunikezwe isixhumanisi sendawo, ukudla kweNorway kufanele kube ukuthanda izakhamuzi zezwe lakithi. NjengeMedithera, ithembisa ukulahlekelwa okungenangqondo kwe-4-5 kg ​​ngenyanga. Kodwa-ke, kufanele kucatshangelwe ukuthi ukudla okusenyakatho sekungenwe kamuva, ngakho-ke kusekuqaleni kakhulu ukuveza ukusebenza kwayo. Kodwa, njengoba besho, uze uzame - angazi, ngakho-ke ake sihlole zonke izinzuzo nezindleko zokuthuthukiswa kweNordic.
Naphezu kokuthi imikhiqizo ye-carbohydrate yokudla yaseNorway ivumelekile, ngokuyinhloko ithekisela kumaprotheni, ngokuqondile ngokudla okuncane kwe-carbohydrates, okuyinto edla ukudla okuncishisiwe kwama-carbohydrate kanye namaprotheni angenamkhawulo. AmaRussia lolu hlobo luphawu lwe-Kremlevka ne-Atkins yokudla, kodwa, ngokungafani nabo, ukuhluka okutshonalanga kwakhiwa ngamehlo hhayi kokuqukethwe kuphela kwe-carbohydrate, kodwa futhi inani lamafutha ekudleni, okwenza kube nokufaneleka. Enye inzuzo ye-design yaseScandinavia ukuthi inani lama-carbohydrate kulo alilinganiselwe kakhulu: ekudleni kukhona okusanhlamvu, isinkwa, amazambane, okungahlanganisiwe ngokuphelele emidlalweni ephansi ye-carb noma asetshenziselwa imali encane. Ukudla okunjalo, nakuba benikeza imiphumela emihle ngokusho kwesisindo, akusiyo njalo inzuzo emzimbeni. Iqiniso liwukuthi amaprotheni okweqile enza umthwalo owengeziwe esibindi nesibindi, futhi ukuntuleka kwama-carbohydrate kungaholela ekulambile kwamasipha omzimba futhi kunciphise inani lamaseli abomvu egazini.
Ngakho-ke, ukudla kwesiNorway kungcono ukusebenzisa kuphela ukuncishiswa okuyisisekelo kwesisindo somzimba, ukunamathela ekudleni okunjalo kusuka emavikini amabili kuya enyangeni. Abalobi bentuthuko efanayo bayancoma ukuba balandele isikhathi eside, kuze kube izinyanga ezimbalwa, esiteji sokugcina umphumela. Kodwa-ke, kulokhu, ukudla kudinga ukuguqulwa: kancane kancane ukunciphisa okuqukethwe kwamaprotheni nokwandisa ukwabelana kwemikhiqizo ye-carbohydrate. Ngaphezu kwalokho, ngokucabangela ngokuningiliziwe "imenyu yaseNorway", singasho ukuthi kunengqondo kakhulu futhi ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo zenyama kuzo zonke izingxenye ezincane zokudla, ikakhulukazi eziningana zamavithamini namaminerali. Mhlawumbe amaScandinavians akuyona inkinga enkulu: kulesi sifundazwe, imikhiqizo eminingi yokudla ibuye ilandiswe ngamavithamini namaminerali. Kukhona ngisho nezinhlelo zikahulumeni ezilawula ukwengezwa kwe-selenium ne-zinc. Lesi silinganiso, ngokulandelana, siye savumela eminyakeni yamuva ukuthi kuthuthukiswe kakhulu izinkomba zezempilo zabakhileyo emazweni aseScandinavia. Abantu bakithi, iningi labo abangenayo i-micro- kanye ne-macronutrients ethile, ngenkathi bebona ukudla kweNorway, kunconywa ukuba bathathe amavithamini-mineral complexes ngaphezu kwalokho.
Enye inkinga ephikisanayo mayelana nokudla kwama-Nordic ukutholakala kwemikhiqizo. Kusobala ukuthi isinkwa okusanhlamvu, ama-oats, ibhali, amazambane, amahlumela aseBrussels kanye ne-zucchini atholakala kunoma yisiphi isitolo. Kodwa ngokudla okudlayo konke akuyona into elula. Ekudleni kwe-Norwegian, umdlalo unconywayo - i-elk noma i-venison. E-Intanethi, kunconywa ukuba uyithathele inkukhu, i-turkey noma i-veal, ebizwa ngokuthi "ukudla". Maye, ukushintshwa okwanele akukwanele: inyama yezilwane zasendle ihluke ngokuphawulekayo nenyama yanoma yiziphi izilwane nezinyoni ezikhulile ekuthunjweni, ngokuyinhloko inani lamafutha ne-cholesterol, kanye nezinto ezifakelwayo ezifuywayo ezitholwa ngefolda ehlangene.
Okufanayo kusebenza kumikhiqizo yobisi. Ukushintshwa ubisi lwezimvu ngenkomo, ngisho noma kungenamafutha, akunakwenzeka ukuhlinzeka ngokuqondile umphumela okulindeleke ngabadali bokudla. Kukhona ubunzima nezinhlanzi nezilwane zasolwandle. Ezindaweni ezisogwini eNyakatho noma eMpumalanga Ekude yezwe lakithi, ngokusho komsoco, mhlawumbe hhayi ngaphansi kweScandinavia. Kodwa izakhamuzi zakwamanye amazwe kumele zaneliswe ukudla okubandayo. Ngeshwa, epholile kakhulu, alahlekelwa ezinye izakhiwo ezizuzisayo, futhi i-polyphosphate glaze, efakazela isitoreji esingcono, ayifaki inani. Kodwa-ke, ungathenga izinhlanzi ezibandayo, kepha ukudla okunama-Nordic, njengeMedithera, kuyoba yi-kopeck.
Ngamafuphi, izakhamuzi zaseScandinavia zokudla eNorway ziseduze kuneMedithera. Kodwa kubantu abaningi baseRussia, ukunamathela ngokuqondile kuyoba nomthelela esikhwameni, okusho ukuthi akuwona wonke umuntu oyokwazi ukunamathela kuloku kudla isikhathi eside. Kodwa-ke, ezinye izakhi zokudla eNorway kufanele ziphawulwe: zizokusiza ukuba uthuthukise ukudla kwakho kwansuku zonke. Ukwandisa inani lezinhlanzi kwimenyu, esikhundleni sokungenani isigamu sezitsha zenyama - ngokuqinisekile kuyoba usizo; ukunciphisa inani lemikhiqizo ye-carbohydrate, ukuyeka amaswidi nama-confectionery; ukunciphisa ukudla okunamafutha; kufaka phakathi kokudla okwenziwe esifundeni sethu, okusanhlamvu, ama-apula kanye namajikijolo e-antioxidant-acebile. Izinguquko ezincane ekudleni kuzosiza ukunciphisa isisindo futhi zibe nethonya elihle empilweni. Ukufingqa, sibona ukuthi izidlo eziboshwe endaweni, njengeNorway noma iMedithera, ziphumelela kakhulu ezindaweni ezivela kuwo. Umzamo wokuwasebenzisa emazweni lapho ikhiqizwe kazwelonke yakhiwe eminye imikhiqizo ayinikezi ngaso sonke isikhathi umphumela oyifunayo. Oh, kuyisihawu ukuthi isobho lethu lendabuko nama-peas anosawoti, ama-cheesecake, amapayipi kanye nezinhlayiya ngaphansi kobuchopho "bokudla kweRussia" ngeke nje kusebenze!
Indlela yokukhetha i-simulator efanele ukusetshenziswa kwekhaya
Indlela yokuhlala ocingweni
Kunanelisa umuzwa wendlala uma ulahlekelwa isisindo?
Indlela yokulahlekelwa isisindo?
Umthelela omubi wokugijima empilweni yomuntu
Indodana encane kaNatalika Podolskaya noVladimir Presnyakov ayithandi izingoma zabazali, ividiyo
Indlela yokubopha intambo ebomvu esikhwameni sakho
Kuncansi kuyingozi ngesikhathi sokukhulelwa
I-sausage "I-minion yonyaka omusha"
Izifo zesifazane, izifo zocansi
Izicathulo kanye nomuntu wesilisa - ingqondo
Izinzuzo Zokuvimbela Abesifazane
Idada ebhaka nge usawoti
I-ayisi-cream yaman ayisikhilimu ayi-vanilla
Pie ne tuna kanye leek
Isaladi nge izaqathi zaseKorea
Ngikuphi ukufa okuzokulinda ngesibonakaliso se-zodiac
Ama-mittens afaka imfashini namagilavu
Phuza recipe kusuka ugqumugqumu nge lemon kanye orange, royal kanye ne-walnut. Jelly kusuka ku-ugqumugqumu ku-multivark
Yini ongayibona ngoFebhuwari 14: amafilimu amasha omculo othandekayo